पर्यटनमन्त्री भट्टराई बोल्दैगर्दा एक्कासी पोर्न भिडियो बजेपछि ! - Shikhar Post Shikhar Post
पर्यटनमन्त्री भट्टराई बोल्दैगर्दा एक्कासी पोर्न भिडियो बजेपछि !
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी भर्चुअल बैठकमा एक्कासी पोर्न भिडियो बजेको छ ।
जुममार्फत गरिएको बैठकमा मन्त्री भट्टराई बोलिरहेकै समयमा एक्कासी अनधिकृतरुपमा ह्यारिस नामका व्यक्ति प्रवेश गरेर पोर्न भिडियो प्ले गरेका थिए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको बैठकमा मन्त्री भट्टराई बोल्दाबोल्दै पोर्न भिडियो बजेको मन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रीसहित झण्डै २ सय जना सहभागी बैठकमा पोर्न भिडियो प्ले भएपछि एडमिनले तत्काल नै भर्चुअल बैठक अन्त्य गरेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरीको साइबर सेलले यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : सोमबार, ८ असार २०७७ १५:३७